Amabhishi ama-7 ahamba phambili eningizimu ye-Italy | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Ukuphunyuka eYurophu, General, Italia, Amabhishi
Lapho isimo sezulu esihle sifika sesivele sizizwa sifana nolwandle, futhi njengoba labo abasendaweni yethu sebesaziwa, sifuna ukuphupha ngamanye amabhishi wezindawo ezithakazelisayo. Njenge- 7 amabhishi amahle eningizimu ye-Italy. E-Italy ngeke kusweleke amabhishi amahle nawangempela, kunoLwandle iMedithera ngemuva futhi kunesimo sezulu esithandekayo.
Qaphela lawa mabhishi, yize siqinisekile ukuthi sinamanye amaningi. Bangamabhishi esihlabathi ambalwa aziwayo, kepha ugu lwase-Italy futhi iziqhingi zigcwele amabhishi afanele ukulahleka kuwo. Okwamanje sizobona ukuhlelwa kwamabhishi ayisikhombisa esingathanda ukuwavakashela namhlanje ukujabulela leso simo sezulu saseMedithera.
1 I-Scala dei Turchi e-Agrigento, eSicily
4 ISpiaggia dei Conigli eLampedusa, eSicily
5 ICala Rossa esiqhingini saseFavignana, eSicily
I-Scala dei Turchi e-Agrigento, eSicily
Siqala ngesinye esaziwa kakhulu kunazo zonke, esaziwa ngalawa mawa amhlophe aqoshwe ngamagagasi nomoya, adale ubujamo obukhethekile, sengathi bekuyizitebhisi. Igama lakho, 'Izitebhisi zabaseTurkey' Kuvela kulamawa nokuthi le bekuyindawo yokuphephela abaphangi baseTurkey emakhulwini eminyaka adlule. Kusogwini lwaseRealmonte, esifundazweni sase-Agrigento. Inesihlabathi esihle namanzi acwebile okugeza, futhi i-limestone ehlala phansi yamawa ibenza babe nalowo mbala omhlophe omuhle ngokungafani nolwandle. Manje abaphangi abasaphepheli kulo, kepha kufanelekile ukuchitha isikhathi ucashe kuleli bhishi, ulele emadwaleni noma esihlabathini.
Uma sikhuluma ngeCapri siyakhumbula ukuthi lesi siqhingi kwakuyisiphephelo sikaPablo Neruda, kodwa futhi nesikhulu Izinkanyezi zaseHollywood ezivela kuma-50s, owathola ipharadesi elihle kulesi siqhingi esincane. Ngakho-ke asikwazanga ukuphuthelwa ezinhlwini zethu ibhishi elisesiqhingini esihle, indawo yokulwisana nepaparazzi yosaziwayo abavela kwenye inkathi. Namuhla kuseyindawo ehlonishwayo, yize kungenjalo njengaseminyakeni engamashumi edlule, kepha isadlulisa intelezi efanayo. IMarina Piccola isesifundeni saseCampania. Itheku elincane elivikelwe ngodonga lwamatshe ngokubukwa kwamawa aphambi kogu. Kunezindlela eziningi zokufika lapho, kepha okuthandwa kakhulu futhi okwangempela kudlula ngeKrupp, indlela ejiyayo yezitebhisi.
ILa Marina dell'Isola ivelele ukwakheka kwayo kwamadwala nokuba olwandle lwasemadolobheni kodwa iphupho. Esifundazweni saseVibo Valentia, e I-Tropea, eCalabria, lolu lolwandle olukhulu, oluphakathi kwe-'Isola Bella 'ne' Playa de la Rotonda '. Kugqame idwala elikhulu elingena olwandle futhi lehlukanise ulwandle, lapho kunesonto laseSanta María de la Isla, indawo endala yamaBenedictine. Ngasikhathi sinye lapho sithokozela khona ugu oluhle, singajabulela idolobha laseTropea, elinezindlu zalo ezibheke eweni, nalapho singabona khona isonto lombhishobhi onomsuka waseRoma.
ISpiaggia dei Conigli eLampedusa, eSicily
Lona 'Ibhishi Lonogwaja' uma sihumusha igama lakhe, ngesiLampedusa. Inegama layo esiqhingini esiphambi kwaso, i-Isola dei Conigli, futhi ithathwa njengelinye lamabhishi amahle kakhulu emhlabeni. Futhi-ke kufanele kube ngoba yindawo yezintombi enhle kakhulu, enamanzi acwebezelayo. Kumele kuthiwe ukufika lapho kufanele uhambe isikhashana endleleni nokuthi ehlobo kuvame ukuba nabantu abaningi. Ekupheleni kwehlobo singabona ngisho ufudu endaweni uma sinenhlanhla.
ICala Rossa esiqhingini saseFavignana, eSicily
Le Cala Rossa ingeka- indawo yemvelo yeziQhingi ze-Aegades, esiQhingini saseFavignana. Indawo lapho kwakwenziwa khona inkwali, futhi manje okuyindawo yezivakashi kakhulu. Manje ivelele ngamanzi ayo acwebile amangalisayo, anethoni oluluhlaza namabala aluhlaza endaweni enkulu yokugeza noma yokuthwalwa ngesikebhe. Indawo ezungezile yemvelo lapho ungathatha khona uhambo futhi ukwakheka kwamatshe kugcwalisa ukunikezwa kwaleli bhishi elithandekayo futhi elihle.
Kutholakala ku- IGargano National Park uzolithola leli bay. Kuleli bay kunezinto eziningi ezigqamayo, futhi lokho ukuthi iyindawo enhle yemvelo enokubukeka kwasendle, okuyiyo, eseyivele iheha kakhulu kunangaphambili, futhi inezambulela ebhishi nakwezinye izinsizakalo. Kugqame iphunga lembali esawolintshi kanye nokwakheka kwamadwala maphakathi nolwandle, akhiwe ukuguguleka kwamanzi nomoya, into esikhumbuza ngamabhishi anjengeLas Catedrales eLugo, eSpain.
Edolobheni lase I-Capo Testa uzothola iCala Spinosa, ibhishi elifinyelelwa yimigwaqo ethe ukwehla kancane. Into enhle ngaleli cove elincane ukuthi akuwona wonke umuntu ozimisele ukwenza umzamo wokufika kulo, kepha impela kufanelekile ukujabulela lawo manzi acwebile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Amabhishi angu-7 ahamba phambili eningizimu ye-Italy